Kismaayo News » Daafaha Aduunka : Mamphela Ramphele, wajiga cusub
Daafaha Aduunka : Mamphela Ramphele, wajiga cusub
Kn: Xisbi cusub oo siyaasadeed ayaa looga dhawaaqay dalka Koonfur Afrika kaasi oo la loolami doona xisbiga talada haya ee ANC, waxaan xisbigani madax ka ah haweeneey siweyn dalkaasi looga qadariyo, oo halgamaa ahayd xiligii midab takoorka taasoo lagu magacaabo Mamphela Ramphele.
Iyada oo warfidiyeenada kula hadlay Johannesburg, ayay shaacisey in doorashada soo socoto 2014 uu xisbigeeda cusub ee “Dhismo” afsoomaaliga ku ah u tartami doono doorashada, waxa ay ANC ku eedeysay musuqmaasuq iyo maamul xumo.
Waa halistii ugu weyndey ee soo foodsaarta ANC oo boqol jirsatay, islamarkaasina ka talisa dalka ugu dhaqaalaha badan Afrika.
Madaxweynaha dalka Vanezuela Hugo Chaves ayaa dalkaasi dib ugu laabtay kadib qaliin lagu sameeyey, isagoo muddo labbo bilood ah ku maqnaa isbitaal dalka Cuma.
Guryo ku noqoshada Chaves waxa laga ogaaday fariimo uu ku qorey bogiisa Twitter-ka, waxayna tani dhalisey damaashaadyo aad u waaweyn oo dalka oo dhan ruxey, iyada oo dadka ay ridayeen baaruud.
Hugo Charves oo siweyn oga hor imaadsan siyaasadaha Maraykanka ayaa waxa laga daweeynayay cudurka Kansarka.
Muuqaalo dayaxgacmeedyada laanta cirbixiyeenimada Maraykanka ee NASA ay soo bandhigeen waxa ay muujinayaan in Bariga Dhexe ay ka jirto biyo yaraan xoogan, iyada oo ay sii gurayaan wabiyadii.
Waxa sawirada cirka laga qaaday ay muujinayaan in ceelal badan oo biyo ah la qodey, taasina ay yareysey biyihii nadiifka ahaa ee keydka ahaa. Tani waa daraasad leer guduudan u shidey bariga dhexe oo markii horaba saxaro u badnaa.
Cilmibaarayaal dalka Maraykanka ku nool waxa ay suurogaliyeen in bacaha caadiga ah laga samayn karo batariga ama tamarta lagu kiciyo diinimooyinka.
Mashruuc ku kacaya boqolaal malyan oo doolar ayaa waxaa la sheegey in nacaha dadka ay isticmaalaan ee qashin ahaan isaga tuuraan loo rogi doono batariyada taleefoonada, saacadaha, gawaarida iyo waxyaabo badan, arintanina waa curin iyo hormar cusub oo aduunka kusoo biirey.